» किरणले फेरि जिते अवार्ड
किरणले फेरि जिते अवार्ड
मकवानपुर, २५ साउन । नेपाल आईडल सिजन ३ का चर्चित प्रतियोगी किरण कुमार भुजेलले पून अर्को अवार्ड जितेका छन् । वाईल्ड कार्ड राउण्ड जितेर उत्कृष्ट ५ मा पुगेका किरणले शुक्रबारको प्रस्तुतिबाट अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेका हुन् । शुक्रबार उनले ‘देख न चम्पा’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा तिनै जना निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । निर्णायकहरुबाट प्रशंसा बटुलेका किरणले यही प्रस्तुतिबाट अवार्ड जितेका हुन् ।
नेपाल आईडलको स्टेजमा भर्सटाईल सिंगरका रुपमा ख्याति कमाएका किरण यसअघि नेपाल आईडलको उत्कृष्ट ७ सम्म पुगेका थिए । वाईल्ड कार्ड राउण्डमा किरणको प्रस्तुतिमा सबै निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन पनि दिएका थिए । उनले शोही प्रस्तुतिबाट अवार्ड समेत जितेका थिए । किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ५ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ४ वटा अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्ट–
अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै उनले गीत गाएको अनुभव छ । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरण एसएलसी सकाएपछि वि.सं. २०६५ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए । ५० वटाभन्दा बढी गीतहरुमा आवाज दिईसकेका किरण अहिले जे ब्याण्डमा आवद्ध छन् । उनका हालसालै आएका केही गीतहरुले युट्युब ट्रेण्डिङमा समेत कब्जा जमाउन सफल भएको थियो । आदरणीय दर्शकविन्द तपाईलाई किरण भुजेलको आवाज कस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।